Siyaasi soomaalida Iswiidhan kal hore aflagaadeeyey oo ganaax la dul dhigay | Somaliska
Siyaasi ka tirsanaan jiray xisbigga Deeganka ee dalkaan Iswiidhan, islamarkaasina xildhibaan gollaha deegaanka ee degmadda Järfälla, ayaa la dul dhigay ganaax dhan 16 ooo ( lix iyo toban kun) oo karoonka iswiidhish-ka ah, ka dib markii soomaalida Iswiidhan si aan xishood laheyd ugu aflagaadeyey baraha bulshadda.
Ninkan soomaalida ku talax gatay ayaa waxaa dacwad ka gudbiyey siyaasi hore oo isagana ka tirsanaan jiray isla xbisgaasi,kaas oo lugu magacaabo Cawad Xirsi. Cawad oo arrintan ka hadlayey ka hore ayaa sheegay in uu rajo ka qabo in sharciga talaabo ka qaadi doono tanoo haatan u muuqata in sharciggu qabtay.
Ugu dambeyntiina ninkan ayaa qoraaladii uu soomaalida sida xishood darradaha ugu aflagaadeyey ayaa waxaa ka mi ahaa”Ma ahan markii ugu horreeysay oo uu qof soomaali ah geeysato dembi noocan ah dhalashaday doonaan ha haystaane, waayo baasaboorka aad heesataa ma hoggaamiyo cawradaada. Soomaalidu guud ahaan waa sidii buro kansar ee oogada ku taal.”
Hadalkan ayaa dad badan ka careeysiyey, hase ahaatee maahan markii ugu horeeyey ee ay soomaalida Iswiidhan la kulmaan aflagaado ceeynkan oo kale ah, waxaadse mooda in soomaalidu yihiin dad ay fudud tahay in la bartilmaamedsado balse aan laheyn awood ay wax kaga qabtaan.